mixcder မှကြိုးမဲ့နားကြပ်အသစ် E9 ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည် Gadget သတင်း
mixcder မှကြိုးမဲ့နားကြပ်အသစ် E9 ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ခဲ့တယ်
Jose Rubio | | ယေဘုယျ, reviews
ယနေ့တွင်အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ယူခြင်းသည်စျေးကွက်တွင်အကြီးအကျယ်ကွဲလွဲနေသောကြောင့်သံသယဝင်စရာပြcanနာဖြစ်နိုင်သည်။ စျေးကွက်၊ မော်ဒယ်လ်နှင့်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူသူတို့၏နည်းပညာထုတ်ကုန်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ Blusens တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Mixcder မှ E9 အသစ်ကိုရရှိခဲ့သည်တက်ကြွဆူညံသံဖျက်သိမ်းခြင်းနည်းပညာနှင့်အတူ headband နားကြပ်.
မှထုတ်လုပ်သည် အရော, headband နားကြပ်များအပြင်အားကစားနားကြပ်များ၊ Bluetooth ထုတ်လွှင့်စက်များသို့မဟုတ်အိမ်စပီကာများကဲ့သို့သောအသံထွက်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချသည့်အမှတ်တံဆိပ်၏ထိပ်ဆုံးနေရာတွင်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟာ ၃.၅ မီလီမီတာအထွက်ရှိတဲ့မည်သည့်ကိရိယာကိုမဆိုကေဘယ်လ်ကြိုးဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့တေးဂီတကိုနားထောင်ခြင်းကိုခွင့်ပြုတာအပြင် ၄ င်း၏အသုံးပြုမှုအတိုင်းအတာကိုကျယ်ပြန့်စေမယ့်ဒီစက်ပစ္စည်းပေါ်မှာအခြေခံပြီးတည်ဆောက်သွားမှာပါ။ ဘလူးတုသ်ဆက်သွယ်မှု။ ငါတို့နှင့်ပူးပေါင်းပါ၊ သူလျှို့ဝှက်ချက်အားလုံးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်
1 box ကို contents တွေကို
6 အဆိုပါ E9 mixcder ၏အကောင်းအဆိုး cons
box ကို contents တွေကို
အစမှစကြစို့။ ထုပ်ပိုးမှုကိုကတ်ထူသေတ္တာကိုယ်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည် အနက်ရောင်အဖုံး။ ဒီအမှုအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် နားကြပ်ကိုလုံခြုံစွာသိုလှောင်ခြင်း ဥပမာအားဖြင့်အသံကေဘယ်၊ သေးငယ်တဲ့ powerbank (သို့) micro USB ကေဘယ်ကြိုးတွေပါ ၀ င်နိုင်အောင်၊ သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုသူတို့အသုံးမပြုတဲ့အချိန်မှာသူတို့အတွက်ဘာအန္တရာယ်မှမခံစားရဘူး။
အမှုတစ်ခု, ရှိခြင်းအပြင် ဇစ်ပိတ်သိမ်း ဒါကြောင့်ငါတို့မှာဘာမှမထွက်နိုင်တော့ဘူး၊ အဲဒါတစ်ခုကရှိတယ် elastic တိပ် အဲ့ဒါကအလျားလိုက်အလျားလိုက်အလျားလိုက်လည်ပတ်စေသည် နားကြပ်များသည်အလွန်မြဲမြံသည် ၎င်း၏အမှုအတွင်းပိုင်း။ ဒီနားထဲမှာနားကြပ်နဲ့အတူသေးသေးလေးတစ်ခုတွေ့တယ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူရှင်းရှင်းလင်းလင်းပလပ်စတစ်အိတ်။ အချို့သောသူများသည်ယနေ့ခေတ်တွင်နားကြပ်များကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ အခြားသူများမှာမူအချို့သောအခြေအနေများတွင်ဘ ၀ ကိုအနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ထို့ကြောင့်ကိုယ်ပိုင်အပြင် ဘာသာပေါင်းစုံသင်ကြားပို့ချမှုလက်စွဲ နှင့် အာမခံသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူကဒ်, ငါတို့အိတ်အတွင်း၌တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် USB-MicroUSB ကေဘယ် ဒီနားကြပ်များ၏ built-in ဘက်ထရီကိုအားသွင်းနိုင်သည့်အရှည်အားဖြင့် ၉၀ စင်တီမီတာရှိသည်။ က အသံကေဘယ် နားကြပ်များမှတေးဂီတကိုနားဆင်နိုင်မည်ဖြစ်ကာ ၃.၅ မီလီမီတာ mini Jack အရှည် ၁၂၀ စင်တီမီတာအရှည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နားကြပ်ကိုလေယာဉ်ပျံပေါ်တွင်အသုံးပြုနိုင်ရန် adapter ။
၎င်း၏ဒီဇိုင်းသည်အပြိုင်အဆိုင် headband နားကြပ်များနှင့်ဆင်တူသည်မှာထင်ရှားသည်။ Headband သည်အတော်လေးသိသာသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်, နှင့်က၎င်း၏အပေါ်ပိုင်းနှင့်ဘေးထွက် pads အပေါ်နှစ် ဦး စလုံးကျနော်တို့အတူတူရှာပါ ပျော့ပျောင်းထိတွေ့ဒြပ်ပစ္စည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နားကြပ်ကိုသက်သောင့်သက်သာရှိရှိအသုံးပြုရန်နှင့်ပျော်မွေ့ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်၊ ၎င်း၏အခင်းသည်ပျော့ပျောင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏နားရွက်ပုံသဏ္andာန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး ခေါင်းနှစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။
နားကြပ်တစ် ဦး ၏ဖြစ်ကြသည် ရက်ရက်ရောရောအရွယ်အစားနှင့်၎င်း၏ pads ဂရုစိုက်ပါ တတ်နိုင်သမျှကိုယျ့ကိုယျကိုခွဲထုတ် နိုင်ငံခြားမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေ၊ လုံးဝနားကိုဖုံးအုပ်နှင့်ကပတ်ဝန်းကျင်။ ၄ င်းတို့၏အဆစ်များသည် Headband နှင့် ပတ်သက်၍ ၉၀ ဒီဂရီအထိလှည့်နိုင်သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာဗေဒနှင့်ပိုမိုကိုက်ညီစေရန်အပြင်သူတို့၏အမှု၌၎င်းတို့ကိုပိုမိုသက်တောင့်သက်သာသိုလှောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ headband ကို 30mm ထိတိုးချဲ့နိုင်သည် အရှည်၌၎င်း, တစ် ဦး ရှိသည် ကျနော်တို့ကတစ် ဦး ချင်းစီအခြမ်းအပေါ်တိုးချဲ့မှုကိုအစဉ်မပြတ်ငါတို့သိနိုင်အောင်ညွှန်ပြချက်ပိုမိုမြင့်မားသောထုတ်ကုန်နှင့်ကိုက်ညီသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အသေးစိတ်တစ်ခု။
ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ပြီးပြီဆိုလျှင်သူ၏သတ်မှတ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ကြှနျုပျတို့မှာ ... ရှိသညျ နှစ်ခု 40mm အချင်းယာဉ်မောင်းသို့မဟုတ်သံလိုက်ပုံမှန်အတိုင်းအတွက်တုံ့ပြန် ကြိမ်နှုန်း 20-20.000 Hz နှင့် SPL သို့မဟုတ် 94dB အသံဖိအားအဆင့်စျေးကွက်၏ပြိုင်ဘက်အများစုတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသောတန်ဖိုးများ။ ၏သင်တန်း Bluetooth ဆက်သွယ်မှုသည် 4.0 ဖြစ်သည်, 2019 ခုနှစ်တွင်ပြီးသားမျှော်လင့်ထားခံရဖို့အရာတစ်ခုခုနှင့်တစ် ဦး ကိုလည်းမျက်နှာသာပေး အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှု (၁၀ မီတာအထိ) က ကြာရှည်စွာဘက်ထရီသက်တမ်းရှိသည်နာရီ ၃၀ မတိုင်မီရောက်ရှိခြင်း။
El အချိန်အားသွင်းခြင်းသည်နှစ်နာရီခွဲခန့်ကြာသည် လုံးဝညှစ်ဘက်ထရီနှင့်အတူစတင်, ထိုသို့ပြုမှဖြစ်နိုင်သည် မည်သည့် USB port မှတဆင့်ကွန်ပျူတာ၊ ပြင်ပဘက်ထရီသို့မဟုတ်ပါဝါ adapter တစ်ခုခုပါ ၀ င်သည်။ ဒါပေါ့, ဆူညံသံပယ်ဖျက်ခြင်းသည်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ၂၄ နာရီအထိ အားသွင်းနိုင်သည့် micro USB နှင့် ၃.၅ မီလီမီတာ audio input jack နှင့် volume up and down ခလုတ်နှစ်ခုပါ ၀ င်သည့် control ခလုတ်သည်နားကြပ်နှစ်ခုစလုံး၏အောက်ခြေတွင်ရှိသည်။
El တွဲဖက်မှုလုပ်ငန်းစဉ် ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်း၊ ကွန်ပြူတာသို့မဟုတ်အသံအရင်းအမြစ်နှင့်အတူပိုမိုလွယ်ကူမည်မဟုတ်ပါ။ ကျနော်တို့ရုံရန်ရှိသည် ပါဝါခလုတ်ကိုဖိထားပြီးနားကြပ်ကိုချိတ်ဆက်ပါ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရင်းအမြစ်တစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုလိုသောထို terminal ရှိ Bluetooth ကိရိယာများကိုရှာပါ။ ငါတို့ E9 mixcder အဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့သည်« connect »ကိုသာနှိပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏နားကြပ်သည်ဆက်သွယ်မှုကိုအတည်ပြုရန်အသံထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ထိုအချိန်ကတည်းကကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ကိုခံစားရန်သာစိုးရိမ်လိမ့်မည်။
La တက်ကြွဆူညံသံဖျက်သိမ်းမှု ဒီနားကြပ်တွေရဲ့ကောင်းကျိုးတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ဆက်သွယ်၍ disconnect လုပ်နိုင်သည် အကောင့်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား« Active Noise Canceling »နှင့်ကိုက်ညီသောအတိုကောက် ANC နှင့် switch ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေသည် နေသမျှကာလပတ်လုံးဘက်ထရီကုန်ခမ်းမထားဘူးအဖြစ်သာရရှိနိုင်ပါသည်။ ခလုတ်ကိုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၌ကစားစရာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်၊ ကျနော်တို့နောက်ခံဆူညံသံအနည်းငယ်သတိထားမိ, ပြင်ပကနေလုံးဝကိုယျ့ကိုယျကို.
အစောပိုင်း၌ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုအရာကိုစိတ်ထဲထားရမည် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆူညံမှုဖျက်သိမ်းခြင်းကိုအသုံးပြုပါကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်လျော့ကျသွားသည်အကယ်လို့သင်ကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုတတ်နိုင်သလောက်တိုးချဲ့ချင်တယ်ဆိုရင်၊ သင်လိုအပ်သည်ဟုယူဆမှသာ၎င်းကိုဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်. setting နှစ်ခုလုံးတွင်အသံသည်သန့်ရှင်းသည်အမှန်မှာ bass သည်ဆူညံမှုဖျက်သိမ်းခြင်းကြောင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည် လက်ရှိစီးပွားဖြစ်ဂီတကိုနားထောင်ရန်ရှင်းလင်းစွာ ဦး တည်ထားသည်. ကျနော်တို့အချို့သောဒိုင်းနမစ်လက်လွတ် ကျွန်ုပ်တို့၏အသံအရင်းအမြစ်ကအထွက်အချက်ပြကိုညီမျှစေရန်ခွင့်ပြုပါကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျော့ပါးစေရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
El ရရှိသောအသံအတိုးအကျယ် တွေ့ပြီ မျှော်မှန်းထားသည်အတွင်း ဒီအမျိုးအစား၏နားကြပ်အဘို့, ဆက်သွယ်မှုလုပ်လျှင် ဘလူးတုသ်အတွက်မူအများဆုံးအဆင့်သည်အနည်းငယ်နိမ့်သည် ဆက်သွယ်မှုသည်ဆိုပါက ဝါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆူညံသံဖျက်သိမ်းမှုကြောင့် ပိုပြီးအသံအဆင့်ကိုလက်လွတ်ဖို့ငါတို့အတွက်ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။ la လက် - အခမဲ့ function ကို ခွင့်ပြုသည် ကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုဆက်သွယ်မှုမိုက်ခရိုဖုန်း၏တည်နေရာသည်ညာဘက်နားကြပ်၏အောက်ခြေတွင်ရှိသောကြောင့်အသံသွင်းထားသောအသံကိုပုံပျက်။ မပျက်ပြားစေဘဲခွင့်ပြုသည်။
ဆက်သွယ်မှု ဘလူးတုသ် ၅.၀
ANC မပါဘဲ Duration 30 နာရီတိုငျအောငျ
ANC ကနှင့်အတူ Duration 24 နာရီတိုငျအောငျ
အချိန်အားသွင်းသည် 2.5 horas
တုံ့ပြန်မှုကြိမ်နှုန်း 20-20.000 Hz
နားကြပ်အရွယ်အစား 19.5 x ကို 16.9 x ကို 27.5mm
ထုပ်ပိုးအတိုင်းအတာ X ကိုက x 20.7 23.8 6.6 စင်တီမီတာ
နားကြပ်အလေးချိန် 272 ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း
စြေး 69.99 €
ဝယ်ယူ link ကို mixcder E9 ပါ
အဆိုပါ E9 mixcder ၏အကောင်းအဆိုး cons
ANC ကို activated သောအခါနောက်ခံဆူညံသံ
mixcder E9 ပါ
သုံးသပ်ချက် - Jose Rubio
အိတ်ဆောင် (အရွယ်အစား / အလေးချိန်)
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » mixcder မှကြိုးမဲ့နားကြပ်အသစ် E9 ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ခဲ့တယ်
Spaceball Zerogravity, Jugetrónicaမှစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောဂိမ်း